मोरङको कानेपोखरीमा गा’डिएकाे अवस्थामा शिशु फेला, कुन पापी होला यस्तो गर्ने? – PathivaraOnline
Home > अपराध > मोरङको कानेपोखरीमा गा’डिएकाे अवस्थामा शिशु फेला, कुन पापी होला यस्तो गर्ने?
admin November 7, 2019 अपराध	0
आफ्नै गर्भमा रहेको नवजात शिशु मा*रेर गा*डेको अ*भियोगमा प्रहरीले मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ की १५ वर्षीय बालिकालाई प*क्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) रामबहादुर ढकाल नेत्रृत्वको टोलीले मंगलबारसाँझ शिशुकी आमा रहेकी बालिकालाई प*क्राउ गरेको हो ।
स्थानीय मेनुका दवाडीको घर पछाडि रहेको करेसाबारीमा सात महिनाको शिशुलाई गा*डेको अवस्थामा मंगलबार साँझ मृ*त फेला पारिएको थियो । बारीमा टमाटर रोप्ने क्रममा हातले माटो खोस्रदा शिशुको हात तानेपछि मेनुकाले आ*त्तिएर हा*रगु*हार गर्दै प्रहरीलाई खवर गरेकी थिइन् ।
इन्सपेक्टर ढकालले सालनाल समेत नकाटिकन लगभग एक फुट जति खनेर गा*डेको अवस्थामा शिशु भेटिएको बताए । आमा बालिका भएकाले उनको परिचय भने गोप्य राखिएको छ । ह*त्या गरेर शिशु फ्या*लेको पाइएपछि आमालाई प*क्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृ*त भेटिएकी शिशु छोरी हुन् । गा*डेको ठाउँबाट बाहिर निकाल्दै प्रहरीले मृ*त शिशुलाई पो*स्टमा*र्टमका लागि उर्लाबारीको मंगलबारे अस्पतालमा लगेको छ ।
प*क्राउ परेकी बालिकाले केही दिन अघि गर्भप*तनको औषधि समेत सेवन गरेको प्रारम्भिक अनु*सन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । औषधि सेवन गरेर गर्भप*तन गर्दै शिशुको ह*त्या गरेको आ*रोपमा प*क्राउ परेकी बालिकाको स्वास्थ्यमा केही समस्या रहेको पाइएपछि उनलाई उपचारका लागि विराटनगरको कोसी अस्पताल लगिएको इन्सपेक्टर ढकालले बताए ।
शिशुको बुवा पत्ता नलागेको र खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत वैशाखमा कानेपोखरी गाउँपालिका–७ स्थित ठूलो बुवाको घरमा गएका बेला चिनजान भएका युवकसँग अ*वैध स*म्बन्ध भएको र त्यही बेला गर्भ बसेको प*क्राउ परेकी बालिकाले स्वीकार गरेको इन्सपेक्टर ढकालले बताए । नाम र ठेगाना भने बालिकाले पनि दिन नसकेको र प्राप्त हुलियाका आधारमा युवकको खोजी भइरहेको उनले बताए । ढकालले डीएनए परीक्षणका लागि पनि नमुना पठाइने जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा बढ्यो खतरा, इटालियन पेस्तोलसहित गेष्टहाउसबाटै समातिए ३ जना!
पर्साबाट पो हुदोरहेछ यस्तो चलखेल! के साँच्चै प्रहरीले नै गर्छन् यस्तो धन्दा?